Kachin State Supreme Court - သတင်းများ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၉)ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာကြားချက်များ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းသည့်အခမ်းအနားကျင်းပ
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော်များ၏ (၁၉)ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှာကြားချက်များ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပွဲကို စက်တင်ဘာလ (၄)ရက် နေ့ နံနက်(၈)နာရီခွဲအချိန်တွင် ဧရာရပ်ကွက်၊ ကချင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးတူးဂျာမှ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၏ (၁၉)ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ မိန့်ခွန်းအား ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားသူကြီးများအား ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်ပြုံးပြုံးအေး၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဦးတူးမော်တို့မှ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအားလည်းကောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ဦးမြင့်စိုးမှ (၁၉)ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှာကြားချက်များ အားလည်းကောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများက တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် စီမံ၊ ထောက်ပံ့၊ ငွေစာရင်းလိုအပ်ချက်များကို အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် ခရိုင်တရားသူကြီးများ၊ မြို့နယ်တရားသူကြီးများမှ တရားစီရင်ရေးအခြေအနေနှင့် တရားရုံးအခြေအနေများကို တင်ပြခဲ့ကြရာ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ဦးမြင့်စိုးမှ တင်ပြချက်များအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြ ခဲ့ပြီးနောက် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးတူးဂျာက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Copyright © 2019 High Court of Kachin State. All Rights Reserved.
Email : kachin.hc@mptmail.net.mm